संसदको अवधि एक वर्ष बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री आबेले संसदको तल्लो सदन विघटन गरेका थिए । उत्तर कोरियाले लगातार गरिरहेको परमाणु परीक्षण र त्यसले जापानमा परेको चुनौतीलाई जोडेर आबेले चुनाव घोषणा गरेका थिए । यो मौकामा चुनाव गराउँदा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने देखेर प्रधानमन्त्री आबेले संसद् भंग गरेका थिए ।
आफ्नो दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी)ले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने अपेक्षा आबेले गरेका छन् । दुई तिहाई सीट जितेर संविधान संशोधन गर्ने र रक्षासम्बन्धमा निर्णयाधिकार आफ्नै देशमा राख्ने चाहना आबेको छ ।
उत्तर कोरियासँग भएको पछिल्लो तनावमा राष्ट्रका पक्षमा बलियो अडान राखेकोमा आबेप्रति जनलहर बलियो देखिएको छ । यही मौकाको सदुपयोग गर्न उनले चुनाव घोषणा गरेका थिए । ताजा मत सर्वेक्षणहरुमा पनि उनको दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अरुको तुलनामा निकै अघि देखिएको जनाइएको छ । (एजेन्सी)
प्रधानमन्त्री देउवाको उम्मेदवारी वारेसनामामार्फत
सत्तारुढ दल र मोर्चाको बैठक सुरु, प्रचण्डद्धारा सहमतिको प्रस्ताव प्रस्तुत
मनाङे कारागार चलान भएसँगै प्रदेशसभा सदस्य खारेज, उपनिर्वाचन कहिले ?
सावधान ! घरमै सुत्केरी भए तीन पुस्ते सार्वजनिक होला !
शुल्क फिर्ताका लागि किन आएन उजुरी ?